Yosua 18 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
18 Afei Israel asafo no nyinaa kohyiae wɔ Silo,+ na wosii ahyiae ntamadan no wɔ hɔ,+ efisɛ afei de, na asase no abedi wɔn nsam.+ 2 Nanso na aka Israelfo mmusua ason a wontwitwaa wɔn nsase mmaa wɔn. 3 Enti Yosua bisaa Israelfo no sɛ: “Mobɛtwentwɛn mo nan ase akosi da bɛn na moakɔfa asase+ a Yehowa mo agyanom Nyankopɔn de ama mo no?+ 4 Mompaw mmarima baasa mfi abusuakuw biara mu na memma wɔnkɔfa asase no so; wonsusuw na wɔnkyerɛw ho nsɛm sɛ wɔn agyapade, na wɔmmra me nkyɛn.+ 5 Wɔnkyɛ asase no mu ason mfa.+ Yuda nnyina n’asase so wɔ anafo+ na Yosef fie nso nnyina wɔn asase so wɔ atifi.+ 6 Monkyekyɛ asase no mu ason, na monkyerɛw ho nsɛm mmrɛ me, na mɛbɔ ntonto+ wɔ Yehowa yɛn Nyankopɔn anim ama mo. 7 Na Lewifo no de, wɔrennya mo asase no bi,+ efisɛ wɔn agyapade ne Yehowa asɔfodi.+ Gad ne Ruben+ ne Manase abusuakuw fã+ no nso anya wɔn agyapade a Yehowa akoa Mose de maa wɔn wɔ Yordan agya wɔ apuei no.”+ 8 Enti mmarima no sɔree sɛ wɔrekɔ, na Yosua ka kyerɛɛ+ wɔn a wɔrekɔyɛ asase no ho krataa sɛ: “Monkɔfa asase no so ntwitwa nto hɔ na monsan mmra, na mɛbɔ ntonto+ wɔ Yehowa anim wɔ Silo+ ama mo.” 9 Na mmarima no siim kɔfaa asase no so kyekyɛɛ+ mu ason, emu biara ne ne nkurow, na wɔkyerɛw wɔ nhoma mu. Afei wɔsan baa Yosua nkyɛn wɔ Silo asoɛe, 10 na Yosua bɔɔ ntonto maa wɔn wɔ Silo wɔ Yehowa anim.+ Enti Yosua kyɛɛ asase no maa Israelfo no maa obiara nyaa ne kyɛfa.+ 11 Wɔbɔɔ ntonto+ maa Benyamin+ asefo mmusua no nyaa wɔn asase. Wɔn asase no da Yuda+ ne Yosef+ mma no ntam. 12 Na wɔn hye no kɔpem Yordan atifi, na ɛforo kɔfa Yeriko+ nkoko so wɔ atifi, na etwam fa bepɔw so wɔ atɔe kɔpem Bet-Awen+ sare so. 13 Na ɔhye no fi hɔ kɔfa Lus,+ wɔ Lus anaa Betel+ nkoko a ɛwɔ anafo no ho; na esian kɔfa Atarot-Adar,+ bepɔw a ɛwɔ Anafo Bet-Horon+ anafo no so. 14 Ɔhye no fi bepɔw a ɛwɔ Bet-Horon anim wɔ anafo no so kɔntɔn fa atɔe fam kɔ anafo; na ɛkɔpem Kiriat-Baal anaa Kiriat-Yearim,+ Yudafo kurow bi. Eyi ne atɔe fam hye no. 15 Na anafo fam hye no fi Kiriat-Yearim ano nohoa kɔ atɔe kɔfa Neftoa+ asuti ho. 16 Na esian kɔfa bepɔw a ɛne Hinom ba bon+ di nhwɛanim no akyi pɛɛ. Saa bepɔw yi kɔ ara kodu Refaim+ bon no atifi fam. Na ɔhye no sian kɔfa Hinom bon mu kɔ Yebusifo+ koko so wɔ anafo fam, na efi hɔ kɔ En-Rogel.+ 17 Na afei ɛkɔ atifi kɔfa En-Semes kɔ Gelilot wɔ Adumim+ koko no anim, na esian kɔ Ruben ba Bohan+ bo+ no ho. 18 Na ɛforo kɔ atifi fam kɔfa Araba koko no anim sian kɔ Araba. 19 Ɔhye no twam kɔ Bet-Hogla+ koko so wɔ atifi fam. Na ano kɔpem Nkyene Po+ no faka a ɛwɔ atifi fam no ho wɔ Yordan anafo. Eyi ne anafo fam hye no. 20 Na Yordan ne asase no hye a ɛda apuei fam. Eyi ne asase a wɔde maa Benyamin asefo mmusua no; n’ahye nyinaa ni. 21 Nkurow a ebedii Benyamin asefo ne wɔn mmusua nsam ne Yeriko,+ Bet-Hogla, Emek-Kesis, 22 ne Bet-Araba,+ Semaraim, Betel,+ 23 ne Awim, Para, Ofra,+ 24 ne Kefa-Amoni, Ofni, Geba;+ nkurow dumien ne ɛho nkuraa. 25 Gibeon,+ Rama, Beerot, 26 ne Mispe,+ Kefira,+ Mosa, 27 ne Rekem, Yirpeel, Tarala, 28 ne Sela,+ Ha-Elef, ne Yebusifo kurow Yerusalem,+ ne Gibea+ ne Kiriat; nkurow dunan ne ɛho nkuraa. Eyi ne Benyamin mma mmusua no agyapade.+